सावधान ! कतै तपाईंका छोराछोरीले यो गेम खेलिरहेका त छैनन् ? ज्यानै पनि जान सक्छ - Jhapa Online
झापा अनलाइन विशेष • सूचना-प्रविधि
सावधान ! कतै तपाईंका छोराछोरीले यो गेम खेलिरहेका त छैनन् ? ज्यानै पनि जान सक्छ
एजेन्सी । पछिल्लो समय एउटा अनलाइन गेम ब्लू व्हेलको भयानक ट्रेण्ड चलिरहेको छ । यो गेमका कारण अभिभावकहरु आफ्ना बच्चाबच्चीको सुरक्षालार्इ लिएर चिन्तित हुन थालेका छन् ।
यस्ता गेमहरु खेल्ने बच्चाहरु आफैलाई चोट पुर्‍याउने, आत्महत्या समेत गर्ने तथा आफ्ना अन्तरंग तस्वीरहरु अनलाइनमा शेयर गर्नेसम्म गर्दछन् ।
त्यसैले आफ्ना बच्चाबच्चीलाई सँगै बसाएर यस्ता खाले भयावह अनलाइन ट्रेण्डस्बाट बच्ने बारेमा अभिभावकहरुले सिकाउनु आवश्यक छ ।
१. ब्लू व्हेल च्यालेन्जः पछिल्लो दुई महिना यता यो गेमको विगविगी छ । यो गेम खेल्नेले ५० वटा यस्ता काम गर्नुपर्दछ जुन निकै खतरनाक हुन्छन् र आफैलाई नोक्सान पुग्ने सम्भावना हुन्छ ।
त्यसमा हरर फिल्म हेर्ने, मध्यरातमा सुतेको बेलामा उठ्ने आदिजस्ता काम गरेर त्यसको फोटो वा भिडियो पोष्ट गर्नुपर्दछ । जति जति टास्क पूरा हुँदै जान्छ, कठिनाइको लेभल पनि बढ्दछ र यसको अन्तिम च्यालेन्ज चाहीँ बलिदान दिनेसम्म हुन्छ । अहिलेसम्म यो गेमका कारण १ सय ३० जनाको ज्यान गैसकेको छ ।
२. द पासआउट च्यालेन्जः यसलाई चकिंग गेम पनि भनिन्छ । यो च्यालेन्जले टिनेजर्सहरुको बीचमा लोकप्रियता हासिल गरिरहेको छ । ख्यालख्यालमै उनीहरु एक अर्काको गला थिच्दछन् ।
यो गेम यस्तो छ की बच्चाहरुले एक अर्काको गला यसरी थिच्नुपर्दछ जसका कारण उनीहरुको मस्तिष्कसम्म रगत पुग्न नपाओस् र बच्चा बेहोस् बनोस् । यो गेमका कारण अमेरिकामा मात्रै वर्षेनी अढाई सय देखि एक हजार सम्मको मृत्यु हुने गरेको बताइन्छ ।
३. द साल्ट एण्ड आइस च्यालेन्जः यसमा टिनेजर्सले सुरुमा आफ्नो छालामाथि नून राख्दछन् र त्यसमाथि बरफ राख्दछन् । नूनका कारण बरफको तापक्रम घटेर माइनस २६ डिग्री सेल्सियस सम्म पुग्दछ ।
जसका कारण चिसोले खतरनाक फ्रस्टबाइट भएर गम्भीर घाउ उत्पन्न गराउँदछ । अनि यसको भिडियो बनाएर अनलाइनमा पोष्ट गरिन्छ ।
४. द फायर च्यालेन्जः यो गेममा आफैले आफ्नै जिउमा आगो लगाइन्छ । पेटमा आगो उठाउने कुनै तरल पदार्थ खन्याएर आगो बाल्दछन् । यो टास्कको भिडियो बनाएर सोसल मिडियामा अपलोड गरिन्छ ।
न्यूयोर्कमा एक १५ वर्षे किशोर यहीँ गेम खेल्ने क्रममा जलेर मरेका थिए । त्यस्तै एक किशोरीले आफ्नो छातिमा रक्सी खन्याएर आगो लगाएको घटना पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
५. द कटिंग च्यालेन्जः यो गेम यस्ता बच्चाहरुसँग खेलिन्छ जसलाई फकाउन सजिलो हुन्छ । यसरी आफ्नै जीउ आफैं काटिन्छ अनि घाउको तस्वीर खिचेर अनलाइनमा पोष्ट गरिन्छ । यसमा जति ठूलो घाउ बनाउन सक्यो उति नै ठूलो टास्क पूरा गरेको हुन्छ ।
यसो गर्नाले लोकप्रिय अनलाइन ग्रुपको सदस्य बन्न पाइने र आफ्नो नाम चल्ने लोभमा किशोर किशोरीहरुले आफैलार्इ हानी गर्ने यस्तो काम गरिरहेका हुन्छन् ।
झापा अनलाइन विशेष • राजनीति
फेसबुकको प्रोफाइल फोटो ‘ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट’ बनाएर अस्ताए प्रकाश
ओलीले दमकबाट भने–चुनाव लगत्तै पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलको काम सुरु हुन्छ
पत्रकारलाई इन्टरनेटमा ६० प्रतिशत छुट, ज्येष्ठ पत्रकारलाई भत्ता
बिर्तामोडको विएण्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने